Bosch iBooster ( or ) ခေတ်​သစ်​ လျှပ်​စစ်​ ဘရိတ်​နည်းပညာ - Myanmar Automobile and Equipment Directory
Braking Booster Actuator အ​ကြောင်း Sharing လုပ်​​ပေးပရ​စေ ၊ ဂျာမနီ နာမည်​​ကျော်​ Bosch ဟာ US Electric Car Company ( Tesla ) အတွက်​ Braking system အတွက်​ အ​ထောက်​ကူ ဖြစ်​​စေမဲ့ ပစ္စည်း တစ်​မျိုးကို 2005 ခု မတိုင်​ခင်​ကပင်​ စတင်ဖန်တီးခဲ့​​ပါတယ်​ ၊ အဓိကက​တော့ ဇိမ်​ခံကားအမျိုးစား​တွေ ဖြစ်​တဲ့ Hybrid ကား​တွေနဲ့ Electric ကား​တွေအတွက်​ Brake power ကို အထူး တိုးတက်​​စေရန်​ ရည်​ရွယ်​ချက်​ နဲ့ ထုတ်​လုပ်​ခဲ့တာပါ။
ဒီ iBooster ကို တီထွင်​တဲ့ ရည်​ရွက်​က​တော့ Safety ၊ Braking power ၊ Comfortable အတွက်​ပဲ ဖြစ်​တယ်​ ... ECU လို့ ​ခေါ်တဲ့ Control Unit ပါတဲ့ အတွက်​သူကို Actuator လို့လဲ အကြမ်းဖြင်း ​ခေါ်နိုင်​ပါတယ်​ ... သူမှာ အဓိက​တော့ Hydraulic ဆီနဲ့ အလုပ်​လုပ်​တဲ့ Master Cylinder ပါမယ်​ ၊ Oil Tank ​လေးပါမယ်​ ပြီးရင်​ Pedal Travel Sensor လို့​ခေါ်တဲ့ နင်းလိုက်​တဲ့ Pedal Shaft ရဲ့ အကွာ ​ဝေးကို sense လုပ်​​နေတဲ့ sensor လဲ ပါမယ်​ ၊ Actuator ထဲမှာ Forward နဲ့ Reverse ကစား​နေတဲ့ Two Stage Gear Unit လဲ ပါမယ်​​ပေါ့ ပြီးရင်​ Gear ကို ​အလုပ်​လုပ်​​ပေး​နေတဲ့ EC motor တစ်​လုံးလဲ ပါပါမယ်​ ... အ​ရေးကြီးဆုံး Pedal နဲ့ တွဲထားတဲ့ input rod လို့်​ခေါ်တဲ့ Brake Pedal Shaft လဲ ပါ ပါမယ်​။
သူရဲ့ ပုံစံက Automated Transmission ​တွေမှာ ပါ​လေ့ရှိတဲ့ ECA ( Electronic Clutch Actuator ) လိုမျိုး Intelligent Braking System ပါပဲ ... Petrol ကား​တွေမှာ ဆိုရင်​ Acceleration Pedal ရှိပါမယ်​ ၊ Brake Pedal ပါမယ်​ .... Manual ဆို Clutch Pedal ပါမယ်​ ... ဒီ System မှာ​တော့ Acceleration Pedal ရယ်​ ၊ Brake Pedal ရယ်​ပါတဲ့ အတွက်​ Braking System ပိုင်းကို အထူး ဖန်​တီးထားတဲ့ Intelligent System ကို သုံးထားဖြစ်​လို့ Safety အတွက်​လဲ စိတ်​ချရသလို ... Driver ရဲ့ နင်းတဲ့ အားကို လိုက်​ပြီး ပြန်​ကန်​ထွက်​ခြင်း ၊ နင်းရတာ ​ပျော့​စိစိ မ​နေပဲ အားကို Control Unit က​နေ Sense လုပ်​ပြီး ... Pedal Shaft ကို Control လုပ်​သွားမှာ ဖြစ်​တယ်​။
Bosch iBooster ကို ရိုးရိုး ကား​တွေမှာ သုံးတာ မ​တွေ့ရ​သေးပါ .... Hybird ကား​တွေမှာ အသုံးပြုကြတယ်​လို့​ပြော​ပေမဲ့ အတည်​မပြု ရ​သေးပါဘူး ၊ ​လော​လောဆယ်​ Tesla ရဲ့ Model S မှာ​တော့ iBooster ကို သုံးထားပါတယ်​ ၊ ဒီလို Intelligent Brake ​တွေဟာ Model မြင့်​ ကား​တွေမှာ ဆို အထူးလိုအပ်​ပါတယ်​ အထူးသဖြင့်​ Electric ကား​တွေမှာဆိုရင်​ သူရဲ့ အမြန်​နှုန်းနဲ့ သွတ်​လပ်​မှုက Engine ကား​တွေထက်​ သာပါတယ်​ ... No Fuel ၊ No emission ဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ သဘာဝ ပတ်​ဝန်ကျင်​ကို ထိခိုက်​မှု နည်း​စေပါတယ်​ ...ဒီလို ဇိမ်​ခံကား​တွေမှာ iBooster ကို သုံးပါတယ်​ ... Innovative Techanology ဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ ​နောက်​ပိုင်း ကား​တွေမှာ​တော့ ပါလာနိုင်​ပါတယ်​။
iBooster ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်​ကတော့ Brake power ကို Boost လုပ်​မှာ ဖြစ်​တယ်​ ... သာမာန်​ကား​တွေမှာဆို ဖြစ်​​လေ့ရှိတာက Brake နင်းလိုက်​ရင်​ Brake Pedal က မိတာ ၊ မမိတာထက်​ မာ​နေတာမျိုး ... Brake က မမိဘူး ၊ နင်းတာက ဆုံးသွားပြီ ... Brake ကို ဖြည်းဖြည်း နင်းပြီး Brake က များများ မိ​နေတာ မျိုး​တွေ ကို အထူးသက်​သာသွားပြီး Brake နင်းရတာ သက်​​တောင့်​ သက်​တာ ရှိ​စေမှာပါ ... ပြီးရင်​ Adaptive Cruise Control ( ACC ) လုပ်​​နေတဲ့ အ​ခြေ ​နေ​တွေဆိုရင်​ Brake က သူဟာသူ အလုပ်​လုပ်​​နေမှာ ဖြစ်​တယ်​ ... ACC ဆိုတာ ကား​တွေမှာ အလို​လျောက်​ အလုပ်​လုပ်​တဲ့ စနစ်​တစ်​ခုပါ ... တစ်​ခု​လေးပဲ ပြသနာ ရှိတာက ECU က​နေ Control လုပ်​တဲ့ စနစ်​ တစ်​ခု ဖြစ်​လို့ ... Dashboard မှာ iBooster Malfunction ​တော့ ​ပေါ်တက်​ပါတယ်​ .. စကားမစပ်​ ABS လဲ ဒီစနစ်​မှာ ပါပါတယ်​ ... သူက အရင်​ထက်​ ပို​ကောင်း​အောင်​ Braking power အတွက်​ Brake Pedal ​နေရာမှာ Intelligent Actuator ကို အစားထိုး သုံးလိုက်​တာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
Read: နော့ကင်းခေါက်သံကြားခြင်း နှင့် ပရီအင်ဂနစ်ရှင်း